Eksaody 7 - Ny Baiboly
14Ary hoy Iaveh tamin'i Moizy: Efa nihamafy ny fon'i Faraona ka mandà tsy handefa ny vahoaka. 15Rahampitso maraina mankanesa any amin'i Faraona hianao, fa hivoaka ho any amoron-drano izy, ka dia ho eo amoron'ny ony hianao miandry azy. Hoentinao eo an-tànana ilay tehina voaova ho bibilava, 16ary hianao hilaza aminy hoe: Nirahin'ny Tompo, Andriamanitry ny Hebrio, ho aty aminao, aho, hilaza aminao hoe: Avelao handeha ny vahoakako, hanompo ahy any an'efitra. Ary indro fa mandrak'izao dia tsy nety nihaino hianao. 17Ka izao no lazain'ny Tompo: Izao no hahafantaranao fa izaho no Iaveh: Hokapohiko amin'ity tehina an-tànako ity ny rano eo amin'ny ony, dia ho voaova ho rà; 18ka ny hazandrano ao anaty ony ho faty, ny ony hanjary maimbo; ary ny Ejipsiana harikoriko tsy te-hisotro ny rano eo an'ony.
28Ho hipoka sahona ny ony, ary hiakatra ireny ka hiditra ao an-tranonao, ao an'efitrano fandrianao, eny ambony farafaranao, ao an-tranon'ny mpanomponao, eny amin'ny vahoakanao, amin'ny lafaoronao, ary amin'ny fanditian-dafarininao. 29Hiakaran'ny sahona avokoa hianao sy ny vahoakanao ary ny mpanomponao rehetra. >